Fanaraha-maso & fanombanana | Fiaretana haran-dranomasina
Ankoatra ny fanaraha-maso izay manombantombana karazan-javamaniry, tetikasa misy substraté fanampiny dia mahazo tombony amin'ny famakafakana ara-toekarena sy fandaniana izay manombana ny fiverenan'ny fampiasam-bola. Anisan'izany ny vidiny toy ny fananganana trano, ny fametrahana ny rafitra ary ny fitazonana ireo rafitra. Ny fiverenana dia misy tanjona kendrena amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana. ref Tokony hifanaraka akaiky amin'ny tanjona amin'ny tetikasa ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso. Ohatra, ireo tetikasa mifantoka amin'ny famerenana ny vatohara ho an'ny fiarovana ny morontsiraka dia tokony hanara-maso ny angovo angovo eny amin'ny morontsiraka, ny tahan'ny herony, ary ny fiantraikany any amoron-dranomasina / ny loza vokatry ny oram-baratra.
Ny 100-1000: Famerenana ny tetikasa Coastal Alabama amin'ny alàlan'ny The Nature Conservancy, Alabama Coastal Foundation, Mobile Baykeeper ary The Ocean Foundation. Ity tetikasa ity dia mikendry hanamboatra ny vatohara 100 kilaometatra ary hampiroborobo ny haavon'ny ranomasina sy ny ahitra 1,000. Sary © Erika Nortemann / TNC
The misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBanky Mondialy 2016 Reportmanokatra fisie PDF dia manome tari-dalana momba ny fomba fijerena tombontsoa amin'ny fiarovana ny morontsiraka amin'ny alàlan'ny vatohara voajanahary voajanahary. Ireo tetikasa ireo dia manamboatra tetikasam-panatanterahana ary azo atao ho an'ny toeram-ponenana hafa (ala honko) na karazana fotodrafitrasa hafa. Misy ny dingana lehibe 5 izay hanombana ny tombontsoan'ny fiarovana ny morontsiraka:
Estimate hydrodynamic offshore
Estimate hydrodynamic nearshore
Vokatry ny fiantraikan'ny trano amoron-dranomasina (habakabaka) amin'ny hydrodynamika
Manombatombana ny tondra-drano na ny fikajiana
Ny fiantraikany amin'ny fahavoazana sy ny alam-baravarana (lanjan'ny fiarovana ny morontsiraka)
Ny pejy 14 amin'ny Banky Iraisam-pirenena dia manome fanazavana lalina ho an'ny tsirairay amin'ireto dingana ireto.
Ny tetikasa famerenana ny famerenana amin'ny laoniny miaraka amin'ny fanorenana substrate dia afaka mandray soa betsaka koa amin'ny fikarohana am-polony taona amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny tetikasa famerenana amin'ny fanamboaran-tsambon'i Oyster dia mampiasa rafitra hanatsarana ny fizotran'ny biôlôjika (toy ny fanangonam-bokatra) sy ny serivisialy (toy ny fiarovana ny morontsiraka). Araka izany, dia angano mivantana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fanorenana vatohara vaovao. Fikarohana sy fikarohana fikarohana maro no manome fampahalalana momba ny fanaraha-maso ny vatohara fanjonoana:
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharam-potoana Fanaraha-maso Fanaraha-maso ho an'ny Fandriam-pahalemana sy Fanombananamanokatra fisie PDF
Fanaraha-maso mahomby hanombanana ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana any amin'ny Hoalan'i Mexico ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBook); Fanaraha-maso ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoChapter)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoOyster Monitoring, Fanaraha-maso ny toeram-ponenana amoron-dranomasina NOAA
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Ny fitantanana ny kirany amin'ny vahaolana voajanahary: Toromarika momba ny fandrefesana sy ny fandoavana ny fiarovana ny tontolo iainana any amin'ny ala honko sy ny haran-dranomasina manokatra fisie PDF